ပထမအကြိမ်မြောက်စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ် မြောက် အစည်းအဝေးအရ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့သော IRCI ၏ရေရှည်စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အနာ ဂတ် ရည်မှန်းချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်
1. သဘောတူစာချုပ် အမှတ် 4-1ကို အခြေခံ၍ 2003နှစ် စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများ ဂျပန်နိုင်ငံ ပြည်တွင်းပြည်ပအနှံ့သို့ အကျုံးဝင်ပြန့်ပွားရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်။
2. ယူနက်စကိုအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကြား ချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူစာချုပ် 4-2 ပါ လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် 4-1တွင် ပြဌာန်းထားသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြည့်မြောက် အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
3. သဘောတူစာချုပ် 4-2 ပါ သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး ယူနက်စကို၏ ကာလလတ်စီမံကိန်း 37 C/4 ၏ ဦးတည်ချက်အမှတ်စဉ်7ဖြစ်မြောက်ရေးကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမည်။
1. ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်၊သုတေသနအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရ မဟုတ် သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီး၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတွင် သမိုင်း ဝင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် အမြောက်အများ ကျန်ရှိနေပါသော်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးရန် စိုးရိမ်နေရသည့် အတွက် ယင်းတို့ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် အစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို သုတေသနပြု ရှာဖွေပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရေး
2. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စဲနိုင်ငံများအား အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်သွားပြီး၊ 2003ခုနှစ် သဘောတူစာချုပ် အချက် 11 မှ 14 ပါ သတ်မှတ်ချက်များအရ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ နိုင်ငံများအတွက် ဆောင်ရွက်သွား သင့်သည်များနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနရှုထောင့်မှ ပံ့ပိုးကူညီဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သွားရေး
3. သမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အရေးကြီး အခန်းကဏ္ဍ တစ်ရပ်ဖြစ်သော သုတေသနနှင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနည်းလမ်းများ ဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက် သင်တန်းနှင့် ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပေးရန် လိုအပ်ပြီး၊ အဆိုပါ သင်တန်းနှင့် ဟောပြောပွဲများသို့ အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ၊ ဒေသ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်းပါဝင်တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်သွားရေး
4. သမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော သုတေသန လုပ် ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ လူငယ်လူရွယ်များအား လက် ကမ်းကြိုဆိုပြီး ပံ့ပိုးကူညီထောက်ပံ့သွားရေး
5. အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စဲနိုင်ငံများအတွက် နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးသွားပြီး၊ သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုအသင်းအ ဖွဲ့အစည်းများအား ပံ့ပိုးကူညီမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရေး
6. သမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းအပြင်ရှိ အမှတ်2စင်တာ နှင့် ယူနက်စကိုအဖွဲ့ချုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး